kuwaas oo helay 10 ugu fiican playlists Spotify? Halkan waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo
Top 10 Best Spotify Playlists? Waxaad Heli Kartaa More Halkan
Spotify ayaa galisay warshadaha ee music geeyo online oo ka mid ah qaababka ugu wanaagsan waa awooda si ay u abuuraan oo ay wadaagaan playlists. Users ee Spotify u sameeyaan waqtiga oo dhan. Yaa adduunka rabin lahaa sida ugu fiican ee isku duwidda music? Sidaas, waxaan go'aansaday inaan idiin soo 10ka xul ee ugu fiican ee playlists Spotidy waqtigan. Kuwan waxaa si rasmi ah shaaca ka playlists ugu caansan ee waqtiga oo dhan ku Spotify. Sidaas, aad hubto in ay iyaga jeclaan badan!
Qaybta 1.Find ka playlists sare isticmaalaya function Browse ku Spotify
Qaybta 2.Search u playlists isticmaalaya Spotify raadinta ikhtiyaarka (Desktop)
Qaybta 3.Search u playlists isticmaalaya 'Waa maxay New' qaybta
Qaybta 4.Find playlists isticmaalaya websites kale
Halkan waxa ku jira xiriirka:
Top maanta Hits http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5FJXhjdILmRA2z5bvz4nzf
Qoob ka ahee Mix Weekend tagi http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5yolys8XG4q7YfjYGl5Lff
Xisbiga Summer 2014 http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/103Zi2NG06F9qimASDrszv
Mood buusterka http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/6uTuhSs7qiEPfCI3QDHXsL
Teen xisbiga http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/3MlpudZs4HT3i0yGPVfmHC
Your XIISEEYO Coffeehouse http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/4BKT5olNFqLB1FAa8OtC8k
Weekend tagi http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5Oo5QuAOjjXMMXphFqC6eo
Marka ay timaado in riyaaqayaa music, Spotify waa wax fudud oo la malaayiin doorasho, waxa kale oo laga heli karaa playlists fara badan oo aad ka heli kartid naftaada. Ina keena aynu si deg deg ah loo eego siyaabo badan oo ka mid ah ka heli kartaa playlists u Spotify.
Raadi playlists sare isticmaalaya function Browse ku Spotify
Browse waa ururinta playlists ugu fiican Spotify ee Android iyo macruufka. Maxaa ka dhigay waxa ay ugu weyn tahay in curation playlist lagu sameeyo in ka badan oo is dhexgalka aadanaha ay dhacdo Browse marka la barbar dhigo Baro iyo Radio, labada kale muuqaalada Spotify in ay inta badan ku xiran yihiin algorithms.
Raadi playlists isticmaalaya Spotify raadinta ikhtiyaarka (Desktop)
Sida ay dhacdo Google raadinta, si fudud aad ku qor kartaa wax aad rabto, tusaale ahaan: 'The Top 100' oo u hesho liis dheer oo natiijada la keyword in si gaar ah. Marka raadinta dhamaato, waxaad arki doontaa qayb playlist ugu sareysa. Markaas waxaad riixi kartaa xalka 'Eeg All' ka jira dhinaca gacanta midigta hoose ee qaybtan iyo dhirta oo dhan playlists ay ku jiraan aad keyword.
Search for playlists isticmaalaya 'Waa maxay New' qaybta
Haddii aad u hesho qaybta 'Waa maxay New', waxa ay kor u furmay liiska dhammaan waxyaabaha ku jira cusub oo ku saabsan Spotify, oo ay ku jiraan playlists ah. Tani waxay sidoo kale waa hab fiican si ay u eegaan ugu playlists ugu badan ee ka mid ah oo dhan.
Raadi playlists isticmaalaya websites kale
Waxaa jira khayraad badan online qaab ah websites sida http://playlists.net/ iyo http://topsify.com/ in aad isticmaali karto si aad u hesho playlists ugu fiican ee naftaada ku Spotify. Marka internetka, waxaad isticmaali kartaa iyada oo playlists lahayn oo Spotify, labada curated khubaro ah oo ay soo gudbiyeen dadka isticmaala adduunka oo dhan. Si fudud guji playlists aad iyo sidoo kale iyaga u ciyaaro ama iyaga la raaco.
> Resource > Spotify > Top 10 ugu fiican playlists Spotify